सस्तो मूल्यको इन्टरनेट प्याकेज खोज्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मासिक १००० रुपैयाँ मुनीका विकल्प - Tech News Nepal Tech News Nepal
सस्तो मूल्यको इन्टरनेट प्याकेज खोज्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मासिक १००० रुपैयाँ मुनीका विकल्प
काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लाइसेन्स लिने कम्पनीहरूको सङ्ख्या १३४ छ । तर ५१ ओटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आज हामी वार्षिक प्याकेज लिँदा मासिक १००० रुपैयाँभन्दा कम मूल्य पर्ने सस्ता इन्टरनेट प्याकेजहरू बजारमा कुनकुन उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा बताउँदै छौँ ।
यो सूचीमा हामीले कम्तिमा पाँच हजार घरमा प्रयोगमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकका १७ ओटा प्याकेजलाई समावेश गरेका छौँ ।
हाल बजारमा उपलब्ध इन्टरनेट प्याकेजमध्ये सीजी नेटको ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सबैभन्दा सस्तो प्याकेजको रुपमा रहेको छ ।
भ्याट बाहेक मासिक ६४९ रुपैयाँ पर्ने यो इन्टरनेट प्याकेज लिने ग्राहकले एक पटकका लागि २५०० रुपैयाँदेखि ३००० रुपैयाँ र ५०० रुपैयाँ रिफन्डेबल डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ ।
वार्षिक प्याकेज लिँदा भ्याट बाहेक ६६३ रुपैयाँ पर्ने यो प्याकेज लिन चाहने ग्राहकले पहिलो पटक राउटरका लागि २५०० रुपैयाँ, सेवा शुल्क ५०० रुपैयाँ, प्रति मिटर २५ रुपैयाँ केबलका लागि र सेक्योरिटी डिपोजिट बापत १५०० रुपैयाँ (रिफन्डेबल) बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो प्याकेजमा आईपीटिभीको सुविधा छैन ।
वेबसर्फरको ५५ एमबीपीएस इन्टरनेट सस्तो प्याकेजको तेस्रो नम्बरमा छ । आईपीटिभी समेत रहेको यो प्याकेजलाई वार्षिक प्याकेज खरिद गर्दा मासिक ७१४ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटक जोड्दा भने राउटर, फाइबर केबल र एसटीबी एक्टिभेसनका लागि दुई हजार रुपैयाँ र १५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ ।
लुपनेटको १५ एमबीपीएस इन्टरनेट वार्षिक प्याकेजमा मासिक भ्याट बाहेक ७२४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यदि आईपीटिभी चाहनुहुन्छ भने यो प्याकेज मासिक ८८७ रुपैयाँमा लिन पनि सक्नुहुन्छ ।
नयाँ ग्राहकले यसका लागि ५०० रुपैयाँ शुल्क र ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेटम्याक्सको १० एमबीपीएस इन्टरनेट वार्षिक ग्राहकले भ्याटबाहेक मासिक ७३७ रुपैयाँमै चलाउन पाउँछन् ।
यसका लागि ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ । यो प्याकेजमा आईपीटिभीको सुविधा भने उपलब्ध छैन ।
कम्पनीको एफटीटीएच सेवा लिन ग्राहकले सय रुपैयाँ ब्यालेन्स र तीन हजार मिनेट टकटाइम भएको ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा समेत पाउँछन् । यस बाहेक मोबाइलमा प्रतिदिन ३०० एमबीपीएस डेटाको सुविधा समेत टेलिकमले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यो प्याकेजमा आईपीटिभीको सुविधा भने उपलब्ध छैन ।
सीमित अवधिका लागि ल्याइएको यो विशेष प्याकेजका लागि ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राखे पुग्छ । यो प्याकेज खरिद गर्दा एनसेलको सिममा मासिक चार जीबीका दरले कूल ४८ जीबी डेटा, ५० मिनेट कल र हरेक महिना ५० एसएमएस निःशुल्क पाइन्छ ।
यो प्याकेजमा आईपीटिभी सेवा भने समावेश गरिएको छैन ।
इन्टरनेटका लागि वार्षिक प्याकेजमा मासिक भ्याट बाहेक ८३३ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसका लागि पहिलो पटक पाँच सय रुपैयाँ थप शुल्क र पाँच सय रुपैयाँकै डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि यो प्याकेजमा आईपीटिभी समेत चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मासिक ९९५ रुपैयाँ पर्ने प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ ।
लुपनेटले वार्षिक प्याकेज लिने ग्राहकलाई मासिक भ्याट बाहेक ९६६ रुपैयाँमै २५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइरहेको छ । यसका लागि थप शुल्क पाँच सय रुपैयाँ र पाँच सय रुपैयाँ डिपोजिट बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
एरोनेटले वार्षिक प्याकेज खरिद गर्ने ग्राहकलाई भ्याट बाहेक मासिक ९९२ रुपैयाँमै २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराइरहेको छ । यसका लागि तपाईंले थप शुल्कको रुपमा ३००० रुपैयाँ र प्रति मिटर तारको २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस बाहेक डिपोजिटको रुपमा १५ सय रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१६. १५. सुबिसुको ३० एमबीपीएस इन्टरनेट
निजी क्षेत्रको दोस्रो ठुलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसुले भ्याट बाहेक मासिक ९९५ रुपैयाँ पर्ने ३० एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसका लागि सुरुमा थप शुल्कको रुपमा २५९७ रुपैयाँ र ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आईपीटिभी सेवा भने समावेश गरिएको छैन ।
१७. सीजीनेटको १२० एमबीपीएस
सीजी नेटसँगै बजारमा आएको यो प्याकेजले नेपालको इन्टरनेट बजारलाई नै उथलपुथल बनाइदिएको छ । कम्पनीको यो १२० एमबीपीएस इन्टरनेटका लागि तपाईंले भ्याट बाहेक मासिक ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटकको जडानमा भने वार्षिक ग्राहकले ५०० रुपैयाँ डिपोजिट बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।